पोखरा- कास्कीमा चोरीका घटना बढ्न थालेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को कारण देशमा लकडाउन भएको करिब २ महिना पुग्दै गर्दा कास्कीमा चोरीका घटना बढ्न थालेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
चैत महिनामा भने एउटा पनि चोरीका मुद्दा दर्ता नभएको कास्कीमा वैशाख महिनामा भने ९ वटा चोरीका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विहिबार कास्कीका पत्रकारहरुसँगको भिडियो कन्फरेन्समा कास्कीका प्रहरी प्रमुख एस.पी. दानबहादुर कार्कीले बताए । कास्कीमा चोरी मुद्दामा १५ जना पुरुष पक्राउ परेका हुन् भने महिला भने चोरी मुद्दामा कुनै उजुरी परेको छैन ।
कास्की प्रहरीले लकडाउनको समयमा वैशाखमा ६ हजार ४ सय ८९ वटा विभिन्न सवारी साधनको चावी नियन्त्रणमा लिएको एस.पी.कार्कीले जनाए । उनका अनुसार कास्कीमा सार्बजनिक हित स्वास्थ्य, सुरक्षा सुबिधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर र अभद्र व्यबहारमा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । वैशाखमा कास्कीमा लागु औषधमा ३, जबरजस्ती करणीमा ५, बैंकिङ कसुर मुद्दा ६, कर्तब्य ज्यान मुद्दामा दुई वटा मुद्धा दर्ता भएको उनले जनाए ।
वैशाखमा ४ सय वटा सवारी साधन चालकहरु कारवाहीमा पर्दा ३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोे कास्की प्रहरीले जनाएको छ । कास्कीमा कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन कास्की प्रहरीले स्वास्थ्य सचेतना, स्वास्थ्य सामग्रि लिने र प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ । कास्कीमा वैशाखमा मात्र आत्महत्याबाट १० जनाको मृत्यु भएको एस.पी. कार्कीले जनाए ।
अत्यावश्यकक सेवा एम्बुलेन्स तथा खाद्य तथा फलफूल तरकारीका गाडीमा यात्रु वोक्ने उपर कारवाही गर्ने एस.पी. कार्कीले चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, “एम्बुलेन्सले बिरामी वोक्ने हो, सार्वजनिक गाडीजस्तै रकम असुल्दै यात्रु वोक्न पाइदैन, खाद्य तथा फलफूल तरकारीका गाडीमा पनि मानिसहरु आएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, अब यसमा हाम्रो थप निगरानी गछौं । ”